पुस्तक वार्ता : अहिले पनि यौन पुस्तक पढ्छु :: Kitab Kiro - Complete Book News
पुस्तक वार्ता : अहिले पनि यौन पुस्तक पढ्छु
२०७४ कार्त्तिक ५ गते कुमार नगरकोटी
अहिले त केही पढिरहेको छैन । पोखराबाट भर्खरै फर्किएँ । एक महिनाअघि पढेर सिद्धाएको पुस्तकचाहिँ ‘द हन्ड्रेड–इयर–वल्र्ड म्यान, हु क्लाइम्ड आउट अफ द विन्डो एन्ड डिस्एपियड’ हो । यो स्विडिस लेखक जोनास जोनासनको उपन्यास हो ।
यसको विषयवस्तु के छ ?
यो ‘एड्भेन्चरस्’ खालको छ । एउटा सय वर्षको पात्र छ । ऊ वृद्धाश्रममा बसेको हुन्छ । आफ्नो सय वर्षको जन्मोत्सवकै दिन ऊ त्यहाँबाट भाग्छ । त्यसपछि उसको यात्रा सुरु हुन्छ । त्यो बुढोमान्छेको यात्रा रोमाञ्चक छ । उसको इतिहास पनि उल्लेख छ । त्यो अद्भूत खालको छ । ऊ २०औँ शताब्दीका प्रमुख घटनाबाट गुज्रिएको मान्छे हो । उसको अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग भेट हुन्छ । अल्बर्ट आइन्स्टाइनको भाइसँग भेटघाट हुन्छ । रसियाको स्टालिनसँग, दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदाताकाका बेलायती प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुन्छ । स्पेनी युद्धमा भाग लिएको छ । माओ त्से तुङकी श्रीमतीलाई सहयोग गरेको छ । उसले ऐतिहासिक घटनालाई आफ्नै प्रकारको आख्यानमा ढालेको छ । हामीकहाँ भने यस्तो प्रकारको आख्यान लेखिएको छैन ।
पुस्तकको छनोट कसरी गर्नुहुन्छ ?
पहिला एकदमै र्यान्डम्ली पढ्थेँ । पढ्ने गाइडलाइन थिएन । अहिले कुन पुस्तक पढ्ने भन्ने जानकारी हुन्छ । नयाँ लेखकले कस्तो लेखिरहेको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड के छ ? भन्ने कुरा खोजी गर्छु । एउटा पुस्तक पढेपछि त्यसको रिफरेन्समा रहेका पुस्तक पनि खोजिन्छ ।
कुन ठाउँमा बसेर पढ्नुहुन्छ ?
म बेडमा सुतेर पढ्छु । पहिला यात्रामा खुवै पढ्थेँ । अचेल यात्रा कम भएको छ ।
प्रायः कुन समयमा पढ्नुहुन्छ ?
राति, दिउँसो । प्रायः फुर्सदै हुन्छ । जुनसुकै समयमा पनि पढ्छु ।
कुनै पुस्तकले सोच नै परिवर्तन गरिदिएको छ ?
कुनै एउटा पुस्तकले जिन्दगी नै टर्न गरिदिएको भन्ने छैन । तर, केही पुस्तकले प्रभावित भने गरेका छन् । कुनै पुस्तकको कहानीले प्रभाव पार्छ भने कुनै पुस्तकको प्राविधिक पक्षले । लेखक बन्दै जाने क्रममा केही लेखकको प्रभाव पर्छ । कसैको लेखन शैलीले, कसैको भाषाले अथवा कसैको प्रस्तुतिले प्रभाव पार्छ ।
धेरै प्रभावित पारेका पुस्तक कुन–कुन हुन् ?
मैले सुरुसुरुमै पढेको पुस्तक इलिसेस हो । त्यहीवेला भर्जिनिया वल्फका पुस्तकले पनि प्रभाव पारे । फ्रान्ज काफ्काको मेटामोर्फोसिस, हर्मन हेस्सेको सिद्धार्थ, खलिल जिब्रानका कविताहरू, नित्सेको दर्शनका पुस्तकले मलाई प्रभाव पारे । पछिल्लो समय रुमियोका कविताबाट धेरै प्रभावित छु । त्यस्तै गाब्रियल मार्खेजको वान हन्ड्रेड इयर्स अफ सोलिच्युडबाट पनि प्रभावित छु । यसमा म्याजिक रियालिटीको प्रयोग छ । यो प्राविधिक कुरा हो । अहिले आख्यानमा मैले प्रेमपूर्वक पढिरहेको अजेन्टाइन लेखक होर्हे लुइ बोर्गेस्, इटालियन लेखक इटालो क्याल्भिनोलाई हो ।
सबैभन्दा मन परेको पात्रचाहिँ को–को हुन् ?
मैले धेरै सम्झिने पात्र अन्ना कारेनिना हो । म उनीसँगको प्रेममा समेत थिएँ । मलान बोभारियन, शिरीषको फूलको सकम्बरी मलाई एकदमै प्रिय लाग्छन् । फ्रेन्ज लेखकको एउटा उपन्यासको पात्र छ इज्नेराल्डा, त्यो पात्र निकै सुन्दर लाग्छ । मैले मेरा लेखहरूमा पनि उसलाई कोट गर्ने गरेको छु ।
युवावस्थामा यौन पुस्तकहरू पढ्नुभयो ?
अहिले पनि पढ्छु । अंगे्रजी भाषाका पोर्नोग्राफिक उपन्यासहरू, पोर्नोग्राफिक म्यागाजिनहरू पढ्छु । ती काठमाडौंमै पाइन्छ । त्यस्ता उपन्यासको नामचाहिँ याद हुँदो रहेनछ । ती पढ्दा सेक्सतिर मात्र दिमाग जान्छ । पुस्तकको नाम र लेखक को हो भन्ने बिर्सिँदो रहेछ । आजभोलि आनन्दका लागि भन्दा पनि सेक्सलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने प्राविधिक कुरा थाहा पाउन पढ्छु ।
नेपाली नयाँ लेखकका पुस्तक पनि आइरहेका छन् । कस–कसका पुस्तक पढ्नुभएको छ ?
अहिले मैले नेपाली पुस्तक पढिरहेको छैन । नेपाली पुस्तकले मलाई छुँदैन । पछिल्लो समय बुद्धिसागरको फिरफिरे पढेको हुँ । मलाई कर्णाली ब्लुजभन्दा फिरफिरे राम्रो लागेको हो । यो मन परेको उपन्यास पनि हो । अरू त पढेको छैन । भर्खरै गणेश पौडेलको पैताला उपन्यास पढेँ । यसको पाण्डुलिपि पनि पढेको थिएँ । यो तान्त्रिक उपन्यास हो । योचाहिँ मलाई पढ्न रमाइलो लाग्यो । नयाँ स्वाद छ । मैले अहिलेसम्म पाण्डुलिपि पढेको थिइनँ । यो नै पहिलो र अन्तिम पाण्डुलिपि हो । अब पढ्दिनँ ।
समीक्षकहरूले ‘पैतालामा नगरकोटीको स्वाद आयो, नयाँ कुरा भएन’ भने । तपाईंलाई चाहिँ आफ्नो स्वाद आएजस्तो लागेन ?
मलाई पनि त्यस्तो लागेको हो । मैले गणेशलाई पनि भनेको थिएँ । ‘तपाईंलाई समीक्षकले नगरकोटी फ्लेभर आयो भन्नेछन्’ भनेको थिएँ । त्यो छ पनि । तर, उनले जसरी लेखे मलाई राम्रो लाग्यो । त्यो अलि बेग्लै छ । प्रायः नेपाली आख्यानमा कथा भन्ने शैली एकै तरिकाको छ । पैताला फरक शैलीमा आएकाले पनि मैले मन पराएँ ।
युवा पुस्तालाई कस्ता पुस्तक पढ्न सुझाब दिनुहुन्छ ?
पुस्तक पढ्नलाई युवा वा वृद्ध भनेर सीमा लाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । मैले आफ्नै उदाहरण दिँदा पनि युवाकालमा म गम्भीर पुस्तकसमेत पढ्थेँ । एसएलसीको रिजल्ट आउनुअघि नै जागिर सुरु गरेको थिएँ । पहिलो तलब लिएपछि ‘वार एन्ड पिस’ पुस्तक पढेको थिएँ । त्यो पुस्तक एक दुई वर्ष पढ्न सकिनँ । त्यसैले रुचिअनुसार पुस्तक पढ्नुपर्छ । रुचिले नै कुन पुस्तक पढ्ने भन्ने निर्धारण गर्छ ।
copied from :http://www.enayapatrika.com/2017/06/08/153916/